မုံရွာ ကုန်စည်ဒိုင်တွင် သီးနှံဝယ်ယူပါက အိတ်ခွံ အလေးချိန်ကို အိတ်၏ မူလအလေးချိန် အရှိအတိုင်?? - Yangon Media Group
မုံရွာ၊ အောက်တိုဘာ ၂၄
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်မှ တောင်သူများထံမှသီးနှံဝယ် ယူပါက အိတ်ခွံတစ်လုံးအလေးချိန်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်း က သတ်မှတ်လာသော ၂၅ ကျပ်သား၊ ၃ဝ ကျပ်သားထား၍ဝယ်ယူ ခြင်းအား ပယ်ဖျက်ကာ အိတ်ခွံ၏ မူလအလေးချိန်အရှိအတိုင်းသာ ဝယ်ယူရေး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်က အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်လိုက် ကြောင်း သိရသည်။
သီးနှံအိတ်ခွံအလေးချိန်များသည် အခြားသောတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များထက် အလေးချိန်ပိုမိုသတ် မှတ်ထားခြင်းကြောင့် တောင်သူ များက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရှိစီးပွားရေး၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီထံတိုင်ကြားလာသဖြင့် ကော်မတီမှစိစစ်ကာ အလေးချိန်အရှိအတိုင်းသာဝယ်ယူရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစိုးရအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုတင်သွင်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းအဆိုကို လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၁ ဦးက ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ”၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်ဈေးကွက် စီးပွားရေးမတိုင်ခင်က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ဝယ်ယူနေတော့ တောင်သူတွေမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ ပွဲစားခတွေ ပေးနေရတယ်။ တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာ မူဝါဒပြောင်းရင်လည်း တောင်သူတွေမှာနစ်နာရလို့ အိတ်ခွံ တစ်လုံး ၂၅ ကျပ်သားအထိ သတ်မှတ်တာဟာ မုံရွာကုန်စည်ဒိုင်ရဲ့ အသင်းဂုဏ်သိက္ခာကိုများစွာထိ ခိုက်စေပါတယ်”ဟု တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူး နိုင်ဝင်းက ဆွေးနွေးသည်။
ယခုအခါ ကုန်စည်ဒိုင်တွင်လည်းအခြားသောတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များက ကုန်စည်ဒိုင်များကဲ့သို့ အိတ်ခွံအလေးချိန်ကို ၁၂ ကျပ်ခွဲသားအဖြစ် လျှော့ချသတ်မှတ်နိုင်ရေးအသင်းများ၏ ဆန္ဒသဘောထားမဲပေးကောက်ခံနေသည်။ တိုင်းဒေသကြီး စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးစိုးဦးက ”တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရကို တိုက်တွန်းတဲ့ အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အိတ်ခွံတစ်လုံးရဲ့ အလေးချိန်အရှိအတိုင်းဝယ်ယူ ရေးဆိုတဲ့စကားကိုပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပီနံအိတ်ခွံက တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးမတူနိုင်ဘူး၊ အိတ်ဟောင်းကို နှစ်ထပ်ထည့်တာတွေလည်းရှိတယ်။ အတိအကျသတ်မှတ်ဖို့ လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ရင်ရောင်း သူနဲ့ဝယ်သူမျှခြေ မဖြစ်ဘဲမလိုလားတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်”ဟု ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။ ယင်းအဆိုကို လွှတ်တော်၏ သဘောထားရယူရန် မဲစာရွက်ဖြင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးကာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်စေခဲ့ရာ မဲပေးသူ ၉၃ ဦးတွင် အဆိုကို အတည်ပြုရန် ထောက်ခံသူ ၈၅ ဦး၊ ကန့်ကွက်သူခုနစ်ဦး၊ ပယ်မဲတစ်မဲ ရှိခဲ့ပြီး ထောက်ခံသူများသောကြောင့် အဆိုအား အတည်ပြုကြောင်း လွှတ် တော်ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာခဲ့သည်။
ပြင်ဦးလွင် တန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံကွင်း အတွင်း၌ ဈေးဆိုင်ခန်း ၄ဝဝ ကျော် ဆောက်လုပ်နေ၊ ဈေ?
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင် ပုဂံဒေသကို ဂုဏ်ပြုသည့် အခမ်းအနား ပုဂံညောင်ဦးမြို့နယ်အသင်း (ရန်ကုန်) ကျင်းပ